Chii icho Apple garandi inotifukidza pane yedu iPhone? | IPhone nhau
Jesu anotema | | iPhone
Kana isu tikatenga chigadzirwa chitsva cheApple tine waranti yepamutemo yenguva yemakore maviri kwatinogona kuwedzera rimwe gore kana tikatenga iyo Apple Care kutenga. Tevere, isu tichaenda kune tsananguro izvo chimwe nechimwe cheizvi vimbiso chinosanganisira uye chii chingave mutengo wekugadzirisa mune Yakabvumidzwa technical Service zvakajairika kuti isu tinogona kusangana.
1 Kujekesa pfungwa
2 Warranty pane iPhone
Tisati tatanga isu tinofanirwa kuziva kuti iyo Apple garandi nemutemo makore maviri uye kana paine chero kukuvara kune yedu kifaa ivo vachazvigadzirisa asi isu tinofanirwa kufunga nezvenzvimbo yekutenga. Mune mamwe mazwi, zvakajairika kuwana zvitoro zvinotengesa zvigadzirwa izvi sekugona kwedu kuzviwana muApple Chitoro asi izvo "zvinotimanikidza" kushandisa yavo yehunyanzvi sevhisi tisati tapfuura neApple.
Iyi poindi inogona kutikonzera matambudziko makuru nekuti kana iri technical technical isina kubvumidzwa, isu tinobva tarasikirwa warandi pamwe Apple.
Kune rimwe divi isu tine sarudzo yekutenga AppleCare , iyo ichatipa rimwe gore rimwe chete rewarandi pane chigadzirwa. Iri sevhisi, kusiyana neinishuwarenzi inopihwa nedzimwe nzvimbo dzekutengesa, inogona kutengwa mukati memazuva makumi matatu nematanhatu ekutenga.
Warranty pane iPhone
Pasina mubvunzo chigadzirwa chakatengwa zvakanyanya naApple uye saka ndicho chinonyanya kushanyira technical Service. Kune vazhinji vashandisi ve iPhone vanofunga kuti nekuti ivo vane garandi, chero kukuvara kune kwavo chigadzirwa kwakafukidzwa neApple uye hazvisi. Izvo zvinowanzoitika kukuvara zvinowanzoitika mabhureki kana kukuvara kwescreen uye matambudziko ebhatiri. Ngatimboongororai idzi mbiri kesi:
Kutanga pa iPhone chidzitiro kugadzirisaTinofanira kuyeuka kuti chero dambudziko rakakonzerwa netsaona harizofukidzwe newadhi yeApple, saka zvinotoda mari kuti tizvigadzirise.
Iyi inotevera tafura inoratidza mitengo yekuchinja iyo skrini mune yega yega mamodheru. Iyi mitengo inoshanda kana iwe uchida kutsiva iyo skrini nekuda kwekukanganisa netsaona kana kushandisa zvisirizvo, kana ikatyoka panguva yewarandi kana kana iyo skrini ikamira kushanda uye iyo iPhone isiri pasi pewarandi, ndiko kuti, chero kukuvara kuchiratidziro, isina kuvharwa newaranti.
Dambudziko repiri rakajairika muPhones ndere bateri. Kana iyo nguva yacho ipfupi, kupfuura zvakajairwa nekushandisa kushoma tinofanira kuenda kuApple Store yedu iri pedyo.
Mune ino kesi, iyo waranti inovhara mitengo yekutsiva bhatiri, asi chenjera, hazvizogara zvakadaro. Semazuva ese, usati waita, Apple matekiniki anoongorora yedu iPhone kuti vaone kuti ibhatiri rakakanganisika. Kana tangoonekwa, tinofanirwa kufunga nezve zvimwe zvinhu kuitira kuti garandi ifukidze kutsiviwa uku.
Bhatiri rinofanira kuve naro pakati pe80% ne100% yeiyo yekutanga mutoro unokwanisa kuitira kuti shanduko ive yemahara.
Kana zvisina kudaro, isu tichafanirwa kubhadhara mari yekunze-ye-garandi sevhisi, sezvakaratidzwa mutafura pazasi.
Chekupedzisira, chero kumwe kugadzirisa kwatinoda pane yedu iPhone senge kukuvara kune bhatani rekutanga, kukuvara kwemvura kana kukuvara kwekushandisa nguva dzose netsaona, kana iri pasi pewarandi, mitengo yakakodzera ichashanda. Aya mareti anonetsa kufungidzira kusvika panguva iyo kuongororwa kwechigadzirwa kunoitwa, asi Apple inogadza tafura yemutengo uko Mari yakakwira yekugadzirisa maererano nemuenzaniso.
Kana uine matambudziko nebhatiri rako, tinokukoka kuti uverenge chinyorwa chinotevera kuyedza kuzvigadzirisa. Maitiro ekugadzirisa iyo bhatiri re iPhone.
Sezvatakambotaura pakutanga, Apple inotipa chirongwa cheAppleCare kuti tikwanise wedzera garandi yechigadzirwa chedu gore negore. Nechivimbiso ichi tinenge tavhara iPhone yedu, bhatiri (chero bedzi risiri pasi pe80%) uye izvo zvekushandisa.
Mutengo weizvi weiyo iPhone iri € 70 pagore, mutengo uyo kana tikazvienzanisa nemutengo wekugadzirisa, wakaderera zvakanyanya uye takafukidzwa chero kukuvara.
Ive nekuchengera zvakanyanya nekuwana chirongwa ichi pane mamwe mawebhusaiti kunze kweiyo yepamutemo kana kupihwa mvumo neApple, sezvo inogona kunge yakachipa asi kana uchinyoresa ivo manyepo zvachose uye havatishandire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Chii icho Apple garandi inotifukidza pane yedu iPhone?
Ini ndinofunga wakanganwa kutaura kuti kuSpain gore rekutanga rewarandi rakanangana neApple uye rechipiri gore riri muchitoro chawakatenga icho.
Zvakare muchikamu cheAppleCare iwe unoti "wedzera warandi gore rimwe nerimwe" asi ini ndinofunga zvinogona kuvhiringidza. Unogona chete kutenga AppleCare kamwe uye inokufukidzira kweanosvika makore maviri kubva panguva yaunotenga foni. Uye iyo "isu takafukidzirwa chero kukuvara" haisi yechokwadi futi, sezvo AppleCare isingavhare kukanganisa netsaona (kunze kweAppleCare + iyo isingatengeswi kuSpain).
Amai vaMwari iyo njodzi yenyaya.
Kwete, hazvina kunyatsoita sekuti Jose, warandi yemakore maviri zvinoenderana nemutemo, inofanirwa kutarisirwa PANZVIMBO YEKUTENGESWA, asi Apple inodzivirira kusagadzikana, sezvo kugadziriswa mugore rekutanga kuchizobhadharwa ne (Apple ) iwe chengetedza nguva uye kusagadzikana kune vatengi. Kana semuenzaniso iwe ukatenga iyo terminal munzvimbo hombe, makore maviri ANOFANIRA kutarisirwa nenzvimbo hombe iyo, inozotorwa kune yakagamuchirwa technical technical service kana kuApple. uye invoice ichabhadharwa, kana iri gore rekutanga Apple kana iri yechipiri Pfungwa yekutengesa. kuva gore rekutanga iro Apple inofanirwa kubhadhara kugadzirisa, nekuti vanoigadzirisa uye nekuonekana nematambudziko uye nguva shoma inopambadzirwa vatengi.
apa iwe une waranti mutemo, iwe unofanirwa kuiverenga, kunyanya poindi 9
Chisungo 9. Nguva dzakatarwa.
1. Mutengesi ane mhosva yekushaikwa kwekuenderana kunoonekwa mukati memakore maviri kubva pakuburitswa. Mune zvinhu zvechipiri-ruoko, mutengesi nemutengi vanogona kubvumirana kwenguva pfupi, iyo inogona kunge isingasviki gore rimwe kubva pakuendeswa.
Sezvauri kuona, MUTENGESI haataure chinhu pamusoro pemugadziri ...
Bhatiri rinofanira kunge riine pakati pe80% ne100% yeyairo yepakutanga yekuchaja kuti shanduko ive yemahara.
JAAAA, hapana nzira, iyo yekushandisa renji ye iphone bhatiri iri kubva ku100% kusvika ku80% (sekutsanangurwa kwandakaitwa nevanyanzvi pandakaita dambudziko nebhatiri rangu, 90% bhatiri ok, kana iri mukati memiganhu iyo Havazoshanduke. iyo nekuti iri mukati mematanho ekushandisa
Applecare chikamu .. zvinotaurwa zvakanaka naJose, Gore negore? Ivo vanongokutendera iwe kuti uwedzere iyo ka1, kuvhara makore maviri warandi kuApple pane panzvimbo yekutengesa.
sekutaura kwajose zvakanaka kwazvo, kwakafukidzwa kupokana neKUDZIDZA KUNOGONESA, zvinokuvadza zvinongovharwa neaplecare + kuti kuSpain hakuna inshuwarisi angashinga ...
NaAppleCare uye mugore rekutanga rewarandi, kana bhatiri richidonha pazasi pe80%, vanoichinja ivo chaiko. Ini ndinopfuudza iyo iPhone 6s uye chinja pasina matambudziko. Asi inofanirwa kunge iri pazasi pe80%
Ndine iPhone X uye iyo system yakaipa, inononoka, dzimwe nguva kuita kwekuvharira hakushande, asi kana ikaziva bhatani bhatani nekuti kana ndikaita iyo SOS inozviziva, iniwo ndine matambudziko nemaapplication akadai sewhatsapp, mutumwa. Kana ini ndichida kufonera vhidhiyo, haindibvumidze, ini ndatoedza pamwe nemamwe maPhones uye kana ikashanda, dambudziko rinongoitika chete paX, pane chero munhu anoziva kana garandi ichiona iwo madhiri?
Mashandiro eShare chishandiso anoshanda mune nyowani iOS 11 mafaera app